Tuesday September 30, 2014 - 13:10:36 in Wararka by Super Admin
Hogaamiyaha Dowladda Mareykanka Brack Obama ayaa sheegay in Dowladdiisu aysan marnaba fileyn in xaaladda sii xumaaneysa ee dalka Suuriya ay soo dedejin kartay in halkaas ay kasoo muuqaan kooxo uu ku tilmaamay kuwo xagjir ah, oo halis badan sida Mujaa
Obama oo wareysi siinayay Shabakadda CBCS NEWS ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dagaalyahannada Ururweynaha Alqaacidda ee horey ay ula dagaallameen Ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ciraaqiyiinta ay usuura gashay inay isku uruursadaan dalka Suuriya, kadibna ay aas aasaan Ururo Jihaadi ah oo sal adag, isagoona tilmaamay in dalka Suuriya uu noqday xarunta ugu weyn ee Jihaadiyiinta Caalamka.
Xukuumadda Washington waxay muddo todobaadyo ah hogaamineysaa xamlo caalami ah oo ay qeyb ka yihiin dowlado reer galbeed ah iyo kuwo Carbeed, waxaana hadafka Xamladaas uu yahay sidii loo xiddido siibi lahaa Mujaahidiinta Dowladda islaamiga ah ee ka dagaallama dalalka Ciraaq iyo Suuriya.
Brack Obama wuxuu qeexay in madaxa Sirdoonka dalka Mareykanka Jiim Kalaabar inuu qirtay horraantii bishan in CIA-du ay ku fashilantay xog ay horey ugu gudbisay mas'uuliyiinta Mareykanka, taas oo aad u yareysay khatarta Mareykanka kaga soo fool leh dalka Suuriya.
Madaxweynaha dalka Marerykanka wuxuu xusay in mas'uuliyiinta Dowladda islaamiga ah u qaabilsan dhinaca Warbaahinta ay yihiin kuwo xirfadoodu ay sarreyso oo aadna u garanaya sida looga faa'ideysto baraha bulshada ee Internetka, waxaana Obama uu sheegay in Dowladda islaamiga ah ay ku guuleystay in iyadoo baraha bulshada adeegsanaysa ay qoroto dagaalyahanno badan oo kasoo jeeda dalalka Yurub, Mareykanka Ustareerliya, iyo Dowlado kale oo Carbeed.
Wuxuu ku tilmaamay Dowladda islaamiga ah iyo Kooxda lagu magacaabo Khuraasaan ee ku xiran Jabhatu Nusrah inay khatar toos ah ku yihiin amniga dalka Mareykanka, isagoona carabka ku adkaayay in la dagaalanka labadaas kooxood ay diiradda u saari doonnaan si ka badan sida uu Mareykanku u doonayo in lagu rido Nidaamka Bashaar Al-Asad.
Mar Obama wax laga weydiiyay inay hubeynayaan kooxaha Mucaaradka ee dalka Suuriya wuxuu sheegay in markii hore ay adkeyd in sidaas la sameeyo, balse hadda ay wadaan qorshayaal ay ku tababarayaan kooxo ka tirsan kacdoon wadayaasha dalka Suuriya oo uu ku tilmaamay inay qunyar u socod yihiin, waxaana uu sheegay in kooxahaas ay ku bixin doonnaan dhaqaale iyo hub si dhulka ay ugula dagaallamaan xoogagga Mujaahidiinta ee dalka Suuriya.
Dhinaca kale Obama wuxuu sheegay in Maamulkiisa ay ka bad baadiyeen buun buuninta awoodda Ciidamada Maamulka Shiicada ee dalka Ciraaq iyo kartida ay u leeyihiin ka hortagidda xoogagga mujaahidiinta ah, wuxuuna Obama uu xusay inay lama filaan ku noqotay in si fudud loo jiiro Ciidamada Meliteriga ee Xukuumadda Shiicada ee dalka Ciraaq, kuwaas oo dhaqaale iyo waqti badan tababarkooda iyo qalabeyntooda uga baxday Dowladda Mareykanka.